Hi, waxaan rajeynayaa in qof iga caawin kara faylasha ka S5 in computer guuraan. Waxaa soo shaqeeyay wanaagsan Kies laakiin hadda waan dhibaatadaan cajiib ah. Oo waxay arrinta ugu weyn ee uu yahay oo kaliya in aan aan la dhaqaajin karin files ka S5 in ay PC laakiin waxa ay ku samayn kartaa wax kasta oo kale.
Qalab badan oo Android kuu ogolaanaysaa inaad galaangal u leeyihiin maamulka card SD kombiyuutarka. Laakiin, wajahay la fayl aad u tiro badan oo ku saabsan kaarka SD, waxaa laga yaabaa in aad dareento in lagu wareero oo ka mid ah aad ka furan kartaa oo files ka Android wareejiyo PC si toos ah. Taa ka sii daran, xiriirada iyo SMS lagu uma wareegi karo computer iyada oo qalab dhinac saddexaad.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka Android inay PC
Ha welwelin. Si files ka Android wareejiyo PC, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Iyadoo tababaraha this Android, aad awoodaan si ay u gudbiyaan xiriirada, music, videos, barnaamijyadooda, SMS, sawiro ka qalab Android si aad u PC si fudud.
Download version saxda ah ee tababare tan Android inay computer socda Windows OS ama Mac. In qayb hoose, ogolaanaysaa 'shaqo la version Windows ah si ay u gudbiyaan files ka Galaxy S3 in PC.
Samee xiriir ka dhexeeya phone Android oo markaas computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ama Wi-Fi. Fadlan ha awood hab debugging USB ah qalabka Android ka hor xiriir. Tababaraha Tani Android aqoonsan doonaa telefoonka Android isla markiiba. Markaas, telefoonka aad Android tusi doonaa in uu furmo suuqa ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, Wi-Fi waxaa laga heli karaa oo keliya marka aad isticmaasho version Windows - Wondershare MobileGo for Android.
Tallaabada 2. files Transfer ka Android inay PC
Tiirka bidix, siday u kala horreeyaan guji "Music" / "Videos" / "Sawirro" si ay u muujiyaan music / video suuqa kala / sawirka. Daaqadda u dhiganta, ay doortaan sida aad doonayso inaad songs / videos / sawiro. Guji "Dhoofinta" ka dibna dhirtuba your computer ilaa meel u helo si loo badbaadiyo dhoofiyo songs / videos / sawiro. Markaas, badbaadin files kuwan.
Sida sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Samsung in PC, waxaad riixi kartaa "Xiriirada". In suuqa kala xiriir ah, doortaan xiriirada aad rabto in lagu wareejiyo. Markaas, guji "Import / Dhoofinta"> "Dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer" ama "dhoofiyo oo dhan xiriirada in computer". In liiska jiido-hoos, doortaan "si file vCard".
Fiiro Gaar ah: Iyada oo MobileGo for Android (Windows), waxa kale oo aad nuqul ka noqon kara xiriiryada ka Galaxy in Outlook, Windows Cinwaanka Book, Windows Live Mail.
Si aad SMS ka Android dhaqaaqo kombiyuutarka, waxaad u tagi kartaa "SMS". Ka dib markii xulashada aad SMS doonayso, waa in aad ku dhufo "Import / Dhoofinta"> "Dhoofinta xulay SMS si computer" ama "dhoofinta SMS oo dhan si ay u computer". Dul caga halkaas oo SMS, kaasaa badbaadi doona. Markaas, guuraan SMS waxaa si qaab .txt ama .xml.
By gujinaya "Apps", waxaad ka heli suuqa kala app. Dooro barnaamijyadooda aad rabto in aad nuqul. Ka dib markii in, guji "Dhoofinta" si loo badbaadiyo barnaamijyadooda ah in aad damisid.
Isku day in aad nuqulka MobileGo for Android files ka Galaxy S3 in PC.
> Resource > Samsung > Bedelka files ka Android inay PC